Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » ATB: Tsy miady amin'ny irery intsony ho an'ny Survival momba ny fizahantany afrikanina
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Travel Wire News • WTN
I Afrika no kaontinanta misy firenena mahaleo tena ambony indrindra. Firenena maro no miankina amin'ny sehatry ny fitsangatsanganana sy fizahantany hahazoana vola vahiny.
COVID-19 dia nanery ny sehatry ny fizahan-tany handohalika.
Androany ny filohan'ny filan-kevitry ny fizahantany afrikanina dia mampifandray ny lisitra faniriana atsy Afrika ho an'ny Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany amin'izao tontolo izao.
A Hafatra ho an'ny fizahantany maneran-tany avy amin'i Alain St.Ange, filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina mikendry an'i Etazonia Mitambatra amin'ny tolona hahatafavoaka velona amin'ny ataon'ilay COVID pendemika amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Ny 27 septambra izao dia Andro maneran-tany ho an'ny fizahan-tany ary fotoana lehibe ho an'ny olona rehetra miankina amin'ny fizahan-tany amin'ny fivelomany mba hisaintsainana ny sehatry ny asany.
"Rehefa miteny aho hoe Andro fifaliana ho an'ny fizahan-tany ho an'ny tsirairay sy ny olona rehetra amin'ny anaran'ny Birao Fizahan-tany Afrikana, dia manetry tena ahy ihany koa ny toe-java-misy eo amin'ny sehatry ny indostria ilaina" hoy ny filohan'ny ATB St.Ange. "
Ny sasany hankalaza ny teny filamatra na andian-teny mahasarika, fa amin'ny fomba ahoana no manova ny fiainan'ireo rehetra izay miatrika fanamby lehibe amin'izao vanim-potoana vaovao-fizahan-tany ho an'ny fizahantany izao.
Ny tontolon'ny fizahan-tany dia mila feo, mila bebe kokoa noho ny hatramin'izay isika ny mpitarika hitarika antsika amin'ny fihazonana ny tanantsika rehefa mamakivaky ity faritra maizina ity isika. Mila fahitana ny indostrianay hijanona ho manan-danja ary mila firaisan-kina tsy mbola nisy toy izany ”hoy i Alain St.Ange izay minisitry ny Seychelles teo aloha tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany, fiaramanidina sivily, seranan-tsambo ary ranomasina.
Amin'ny Andro Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany Andriamatoa St. Ange dia manao fehin-kibo manga hita taratra ny ranomasina manga, ny lanitra manga ary ny ho avy mamiratra kokoa ho an'ny tontolon'ny fizahan-tany, ary ho an'i Afrika.
Ny famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany ataon'ny be dia be dia be ankehitriny dia mety hampidi-doza, ny asa amin'ny fizahantany dia tonga ary tsy azo antoka ny faharetany ary izany dia satria ny tsena loharanom-pizahan-tany manan-danja dia mitokana fisarahana amina firenena tandindomin-doza satria ireo firenena ireo no tolona mora tohina indrindra. fatra voalohany amin'ny vaksinin'ny Covid-19 ho an'ny olony.
Izao tontolo izao dia nifindra avy tamin'ny fomba iray nanatonan'izao tontolo izao tamin'ny toe-javatra iray izay niadian'ny tsirairay mba hahatafavoaka velona azy ireo nanadino ny rohy malemy ao amin'ny rojo vatofantsika dia handrava ny sambo mitaingina azy ihany.
Ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany dia miorina ao amin'ny Kingdom of Eswatini ary manana tanjona iray. Izany dia ny hahatonga an'i Afrika ho làlana fitsangatsanganana tian'izao tontolo izao.
Fanazavana fanampiny: www.africantourismboard.com
Ny firaisankina sy ny fahitana dia tsy maintsy raisina ho iray rehefa manolo-tena amin'ny fifohazan'ny fizahan-tany isika.
Andro fifaliana ho an'ny fizahantany manerantany!
Fiantraikany ara-toekarena amin'ny COVID-19 amin'i Afrika: